यी राशि भएका मानिसले प्रेम र बिबाह गरे असफल हुन्छन् « गोर्खाली खबर डटकम
२०७८ असार १ गते मङ्गलवार प्रकाशित
पूर्वीय दर्शन, ज्यातिषशास्त्रको माध्यमबाट विविध खालका समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। सामान्य रुपमा व्यक्ति आफ्नो जीवनमा तीन प्रकारका समस्याको सामना गर्छ।पहिलो करियार, दोस्रो धन र तेस्रो विवाह । यी तीन कुरा सही भएको खण्डमा जीवन सही रुपमा अघि बढ्न सक्छ।ज्योतिष विद्या मा १२ राशी र ९ ग्हमा आधारि तछ । तपाईको जन्मको समय, स्थानका आधारमा तपाईको जन्मकुण्डली बनाइन्छ ।
जसले तपाईको जीवनको पूर्ण विवरण दिनसक्छ।विवाहयो पनि पढ्नुहोस
यस्तो सपना देख्नु भो ? बुज्नुहोस सम्वृद्धि र धन प्राप्त हुँदैछ !महिलाले भुलेर पनि नलगाउनुहोस् यो दिशातर्फ फर्केर सिन्दुर, नत्र…विवाह यो सम्बन्धमा जोडिने दुईबीचको सामजस्यता हो। राशि अनुसार केटा र केटीबीचको प्रेम सम्बन्ध या विवाह कुन हदसम्म र कति सफल हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ।थाहा पाउनुहोस् कुन कुन राशिकाबीच विवाह गर्न गल्ती हुन्छ
-मेष र कर्कट-कुम्भ र कर्कट -सिंह र वृष- वृश्चिक र मेष -मिथुन र कर्कट -सिंह र कन्या- -मकर र तुला -कुम्भ र वृष -मीन र सिंह -मकर र धनु -वृश्चिक र कुम्भ -मिथुन र मिन यी राशी भएकाहरुबीच विवाह र प्रेम सम्भवन्ध भएको खण्डमा ती सम्बन्धहरु दिगो र लामो समय चल्ने खालका हुँदैनन्। यदी माथि उल्लेख गरिएका राशीबीच विवाह र प्रेम सम्बन्ध कायम छ भने ज्योतिषीसँग सल्लाह लिन आवश्यक छ। दुई राशी र तिनका कुण्डलीका आधारमा ज्योतिषमा तिनको दोष कट्टा गर्ने उपायहरु समेत उपलव्ध भएको हुन्छ।
चितवनको दा’सढुंगामा यसरी ठो’क्कियो ट्रक र कार, दुई जनाको मृ’त्यु
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ घट्यो,तोलाको कती? हेर्नुहोस
आशाका किरण लिएर आयो असार महिना ,कुन राशिलाई कस्तो फल मिल्छ ?